Ukufunda ukufunda nokubhala umculo - inqubo eyinkimbinkimbi kudinga ukuzimisela kanye umsebenzi onzima phezu ingxenye umfundi. Omunye izigaba le nqubo - nalesikhathi cwaningo.
Uma sithola ukuqhathanisa phakathi ekutadisheni lolimi Russian nokubhala zomculo, nalesikhathi zomculo iyafana ilunga. Uhlamvu ngokuvamile siqukethe izinhlamvu ezimbili, nezikhawu luyinhlanganisela imisindo emibili. Zingase zithathwe kanyekanye noma ngokulandelana - akunandaba.
Kunendaba yini ibanga phakathi umsindo incike igama "isitayela". Amabili umsindo eduze kukhona at ibanga elilodwa semitone. Lona iyunithi elincane ushintsho isikhawu. semitones amabili akha ithoni.
Musical isikhawu libhekene izinyathelo kanye nemisindo. Izinyathelo - ngamanothi ezimbili ezihlukene. Ngaphansi stupenevoy ukubaluleka isikhawu baqonde titepisi, okuyinto ezibekwe phakathi umsindo isikhawu.
Ithoni kunani lobubanzi kubalulekile. Ngisho ngezikhawu iyunifomu elakhiwa linani lelehlukile amathoni, ngakho stupenevaya ukubaluleka asichazi sanhlobo.
Lumelela ithoni ukubaluleka tiphawulo:
- encishisiwe kabili;
- kabili anda.
Eqoshiwe ngaphambi kwalezi tiphawulo Izinombolo, okuyinto ukuveza stupenevuyu value.
Isikhawu lokuqala zomculo - prima (1). Kuyinto ukuphindaphindwa umsindo. Nokho-ke kubizwa ngokuthi ngu net. Lokhu kuhlola kulandelwa ngomzuzwana (2). Kukhona umehluko mncane (0.5 iphimbo), futhi ezinkulu (1 ithoni) imizuzwana. Ngaphezu kwalokho, ukuze: ezincane futhi ezinkulu kwezintathu, wesine, Newt, yesihlanu, ezincane lesithupha sevenths ezinkulu, ezincane kanye ezinkulu enothini. Ngamunye sokuphumula in umculo lihlukile sangaphambilini ngomunye semitone.
Kuye bamba kanyekanye noma ezilandelanayo ukuhlukanisa ngezikhawu ngokulandelana harmonic kanye namanothi. Kusukela lokho evumelanayo zomculo akhiwa inhlanganisela umsindo incike ukuthi isikhawu ivumelane noma, kunalokho, usike indlebe.
ngezikhawu Simple zomculo - lena inhlanganisela umsindo ngaphakathi enothini olulodwa. ngezikhawu ebanzi, ngaphandle kokuhamba nanhlanu, ngokuthi izingxenye. kuthiwa Okunye ukuhlanganiswa hhayi ngokuvamile ubhekwa njengomunye esingaba ezimele zomculo.
Isikhawu kuyolungiswa, okungukuthi, ukuhambisa omunye umsindo yayo i enothini phezulu noma phansi. It kuvela ukuthi umsindo uqala ukuhlaba aphansi engenhla, futhi engenhla - ephansi. Lokhu kushintsha ububanzi izinga. Lapho eneminyaka engu-ezincane, kuyoba omkhulu, futhi okuphambene nalokho. Isikhala okumsulwa nje iyohlala ihlanzekile. Nokusingatha isikhawu elula - kuyinto ukudluliswa kwe-enothini ka omunye umsindo walo. Inani stupenevyh amagugu kokuqala nezikhawu kuhlehlisiwe uyohlale elilingana ayisishiyagalolunye. Lapho ukuthinta isikhawu esiyinhlanganisela kuyinto ukudluliswa kokubili imisindo. Kulokhu-ke umsindo engenhla idluliswe phansi, futhi phansi, ngokulandelana, phezulu. Inani Inani stupenevyh uhlala elilingana elishumi elinamithandathu.
Ngaphambi kokuqhubeka ekutadisheni izihloko ezilandelayo, kumele siqonde kahle imfundiso yokuziphendukela ngezikhawu zomculo. Kuyinto - ngesisekelo esikoleni zomculo (emva umculo, vele). Inxanxathela akukho. Umlisa ogama umgomo kuwufanele ukutadisha umculo, kulula ukukhumbula zonke amagama izinhlobo inetrvalov.
Herpetology - isayensi study ezihuquzelayo nezilwane eziphila ezweni